Ukumaketha kohlelo lokusebenza lweselula kuyasebenza
Ukusebenza Kwe-Mobile App Push Marketing
NgoLwesine, Februwari 6, 2014 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngokusho kwe-Responsys 'SVP Yeziteshi Ezikhulayo uMichael Della Penna, ngo-2020 kuzoba khona Amadivayisi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-75 ixhunywe kufayela le- Inthanethi Things. Lokhu akubona abantu… amakhaya ethu, izimoto zethu, amapulatifomu ethu, kanye namadivayisi wethu wezokwelapha konke kuthuthukisa izinhlelo eziphelele zeselula namathebulethi susa izaziso.
Abakwa-Responsys muva nje bathumele inhlolovo yokumaketha ephathekayo yabathengi abangu-1,200 68 base-US futhi bathola ukuthi amaphesenti angama-18 wabathengi abalande izinhlelo zokusebenza, anike amandla izaziso zohlelo lokusebenza. Phakathi kwabathengi abancane (abaneminyaka engu-34-80 ubudala), cishe amaphesenti angama-XNUMX. Njengoba uzobona ku-infographic engezansi, i-Push iyisiteshi abathengisi okufanele bangasinaki.
Empikiswaneni, kufana ne-imeyili, kuzoba ukuthi abathengisi ngokukhalipha bakusebenzisa kanjani ukukhangisa kwe-push. Uma izaziso zohlelo lokusebenza zingabalulekile kumsebenzisi, zizocisha. Nginomuzwa wokuthi uzoba yindawo ejwayelekile kakhulu. Ngihlale phansi isikhathi esingangehora futhi ngikhubaze iningi lezicelo ebelithumela izaziso zohlelo lokusebenza kimi ... bezingabalulekanga ngokwanele ukuthi zingaphazanyiswa.
Tags: UMichael Della PennaUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukumaketha amaselulaPhushaukumaketha kwe-pushizimpendulo
I-Socialbungy: Ipulatifomu Lakho Lokumaketha Lontanga